I-11 ephezulu yeCerebral Palsy Scholarship 2022
Novemba 27, 2021 Eze uThadayo
Ubungcali obuphezulu be-11 yeCerebral Palsy Scholarships
Apha unokufumana iinkcukacha malunga ne-cerebral palsy scholarships kunye nendlela abantu abakhubazekileyo abanokufumana ngayo ezi bhasari.
Baninzi abantu kwihlabathi liphela abaphethwe sisifo esinye, isifo, usulelo, okanye ukukhubazeka, okanye enye into kwaye aba bantu ngokucacileyo bafuna ukhathalelo olulodwa. Uninzi lwabantu abakhubazekileyo, umzekelo, abanako ukuzimela kwaye baxhomekeke kwisisa soluntu.
Uluntu emva koko luyabanceda ngokusebenzisa iziseko zesisa kunye nemibutho kunye neminye iminikelo yokubanceda kwiimfuno ezisisiseko. Ngamanye amaxesha le minikelo igqitha ekusombululeni imiba esisiseko kwaye iqhubeke nokubanceda kwezinye iimfuno ezinje ngezifundo zokufunda kwabo banomdla wokufumana imfundo ephezulu.
Kule posi nangona kunjalo, asizukuthetha ngezona mfuno zisisiseko zabakhubazekileyo kodwa sigxile kwizifundi ezibhekiswe ngokukodwa kubantu abanengxaki yokukhubazeka kwengqondo.
Ke, ukuba ungumntu onesiphene sokukhubazeka kwengqondo okanye uyazi umntu onesifo kufuneka ubabonise eli nqaku njengoko lingabanceda kakhulu.
Uluhlu lwe-cerebral palsy scholarship luchaziwe kweli nqaku kwaye izifundiswa ziyilelwe ukukhuthaza abantu abachaphazelekayo koku kukhubazeka. Aba bantu, njengabo bonke abanye abantu abaqhelekileyo, banamaphupha, iminqweno, kunye neenjongo nabo abajolise ukuziphumeza.
Ngale mfundo yokufunda yokukhubazeka kwengqondo, banokuthi, ngandlela thile, baqalise amaphupha abo kwikholeji, eyunivesithi, okanye iziko lobugcisa. Kananjalo iya kuyiphakamisa kakhulu imiphefumlo yabo ekuhlaleni, ekuhlaleni, nakwilizwe ngokubanzi ngokubakhathalele kakhulu malunga neenjongo zabo ebomini.
Awunako oku kukhubazeka kodwa unokufuna ukunceda umntu onakho kwaye ongazi nokuba ungabachonga njani okanye ongayazi intsingiselo, iZizwe eziManyeneyo zazikufikelela.
Yintoni uCerebral Palsy?
I-Cerebral palsy sisifo sokuzalwa sokuhamba, ithoni yemisipha, okanye imeko ebangelwa kukukhula kwengqondo okungaqhelekanga. Unyango lunokunceda kodwa imeko ayinakunyangeka _ikhishwe kwiGoogle
Ngenxa yesi sifo semisipha intshukumo yabo inokubonakala inzima, ngelixa abanye behamba ngokuzimela abanye kufuneka basebenzise isitulo esinamavili.
Ngaba abantu abane-cerebral palsy baya ekholejini?
Ukucinga ukuba abantu abane-cerebral palsy bangaya kwikholeji, eyunivesithi, okanye isikolo soqeqesho? Ewe! - impendulo yoko ngu-Ewe! -Bangaya nakweliphi na iziko eliphezulu abazikhethele lona kanye njengaye nawuphi na umntu oqhelekileyo.
Kuye kwafakazelwa ukuba i-cerebral palsy ayichaphazeli ubukrelekrele kwaye abantu abakhubazekileyo banokuba ne-IQ efanayo njengaye nawuphi na umntu oqhelekileyo.
Ngaphandle kokuqhubela phambili, masingene kumxholo ophambili. Ufunde kakuhle!
1 Yintoni uCerebral Palsy?
2 Ngaba abantu abane-cerebral palsy baya ekholejini?
3 Ukufundiswa kwezifo zengqondo
3.1 I-AmeriGlide Achiever Scholarship
3.2 Amaziko oMthetho we-ABC eCerebral Palsy Scholarship yoNyaka
3.3 INCIGHT Scholarship
3.4 I-PO Postili yezifundo zesidanga sokuqala
3.5 UJohn Lepping Memorial Scholarship
3.6 IMicrosoft Scholarship
3.7 ICharlotte W. Newcombe Foundation Scholarship yaBafundi abakhubazekileyo
3.8 Ukuzalwa kweGqwetha lokuLawulwa kweGqwetha leCerebral Palsy Scholarship
3.9 IBryson Riesch Paralysis Foundation Scholarship
3.10 IMcBurney Scholarship yaBafundi abakhubazekileyo
3.11 INorth Central Kiwanis yeSikhumbuzo seNgxowa-mali yokuFunda iScholarship
3.12 I ngcebiso
Ukufundiswa kwezifo zengqondo
Oku kulandelayo uluhlu oluhlanganisiweyo kunye neenkcukacha ze-cerebral palsy scholarships:
I-AmeriGlide Achiever Scholarship
Amaziko oMthetho we-ABC eCerebral Palsy Scholarship yoNyaka
O. Iipostili zesidanga sokuqala
UJohn Lepping Memorial Scholarship
ICharlotte W. Newcombe Foundation Scholarship yaBafundi abakhubazekileyo
Ukuzalwa kweGqwetha lokuLawulwa kweGqwetha leCerebral Palsy Scholarship
IBryson Riesch Paralysis Foundation Scholarship
IMcBurney Scholarship yaBafundi abakhubazekileyo
INorth Central Kiwanis yeSikhumbuzo seNgxowa-mali yokuFunda iScholarship
I-AmeriGlide yinkampani ebonelela kwaye isasaze zonke iintlobo zeemveliso ezinokufikeleleka ekhaya ezinjengezinyusi, izinyusi zesitulo esinamavili, kunye nezinye iimveliso zokuhamba.
Le nkampani-i-AmeriGlide-isungula i-AmeriGlide Achiever Scholarship yokubonelela ngokusisigxina kwabafundi beekholeji abasebenzisa incwadi enamavili okanye yesitulo esinamavili okanye isithuthuthu sokuhamba. Ibhaso le- $ 2,500 liya kunikwa umfaki sicelo ukuba ahlawule iindleko zokufunda kunye neencwadi.
Ukuba unomdla kwesi sibonelelo-mali emva koko uhlangabezana nezi mfuno zilandelayo ukuze ufaneleke:
Abafakizicelo kufuneka babhalise njengabafundi abenza isidanga sokuqala okanye kwiikholeji ezigunyazisiweyo zeminyaka emine okanye emibini eMelika.
Kufuneka ube nonyaka omnye wamava ekholejini
I-GPA encinci ye-3.0 iyadingeka
Kufuneka ube ngummi waseMelika okanye ubambe i-visa esemthethweni yomfundi oko kuthetha ukuba abafundi bamanye amazwe banokufaka isicelo.
Gcwalisa isicelo kwaye uthumele impendulo kumbuzo wesincoko - "Zithini iinjongo onazo ngobomi bakho, kutheni unazo nje iinjongo, kwaye yintoni ekhuthaza ukuba uzifezekise?"
Faka isicelo se-scholarship apha
Esi sesinye sezifundo zonyaka zokukhubazeka kwengqondo ezinikezelwa kumenzi-sicelo omnye ofuna, kwinkqubo yokugqiba okanye ukufumana imfundo ephakamileyo kwiziko elamkelweyo eUnited States nokuba ngumfundi ophumeleleyo okanye owenza isidanga sokuqala.
Ukufaka isicelo sale mali yokufunda, kuya kufuneka ugcwalise isifundi, ungenise umbhalo osemthethweni kunye nesincoko esingekho ngaphezulu kwamaphepha amabini achwetheziweyo, anendawo eyodwa echaza indlela ochaphazeleke ngayo yi-cerebral palsy.
I-INCIGHT sisifundiswa ngokubanzi sabo bakhubazekileyo esenza ukuba kudlule enye yezifundo zokukhubazeka kwengqondo. Abafakizicelo abanomdla kufuneka babhalise kwiyunivesithi eyamkelweyo, kwikholeji, okanye kwiziko lomsebenzi.
Ukuze ufaneleke kwi-Incight ibhaso le- $ 1,000 abafaki zicelo kufuneka bafumane isifo se-cerebral palsy okanye okunye ukukhubazeka kwaye babonise ubungqina, ube ngumhlali waseWashington, Oregon, okanye eCalifornia. Abafakizicelo kufuneka babonise ukusebenza ngokugqwesileyo kwezemfundo kunye nenkonzo kuluntu lwabo ukuze bafumane le mfundo.
I-PO Postili yezifundo zesidanga sokuqala
I-Postili ye-grade-grade scholarship yenye ye-cerebral palsy scholarships-ngokukodwa ngokukodwa - kodwa kumaqela angaphantsi kwamanani kuquka abafundi abakhubazekileyo. Ke, ukuba ucelwa umngeni kukukhubazeka kwengqondo, unokufaka isicelo sobufundi.
Ixabiso le-scholarship yi- $ 4,000 enikezelwa rhoqo ngonyaka-ivuselelwe ukuya kuthi ga kwiminyaka emihlanu- ukuya kwi-2-7 yabantu abadala kwizikolo eziphakamileyo ezivela kumaqela amelwe ngaphambili. Umfaki-sicelo kufuneka abe ne-GPA encinci ye-3.0 kwisikali se-4.0 kwaye ubonakalise impumelelo kwezemfundo kwizifundo zezibalo kunye nesayensi.
Umfaki-sicelo kufuneka abe nomnqweno onamandla wokulandela ikhondo kubunjineli bombane, ubunjineli bekhompyuter, okanye isayensi yekhompyuter kwaye abonise isidingo semali. Ngabahlali base-US kuphela abanelungelo lokufaka isicelo.
Ibhaso lilonke leli bhasari li- $ 5,000 kwaye lenzelwe abafundi abanesakhono somzimba okanye sengqondo abafuna ukuqhubela phambili imfundo yabo kwiziko eliphezulu. Kuba i-cerebral palsy kukukhubazeka okujongana nokwenyama, emva koko unokufaka isicelo sale mali yokufunda.
Kuphela ngabafundi abahlala kwi-NY, NJ, okanye kwi-PA abanokufaka isicelo sokufunda.
IMicrosoft, inkampani enkulu yezobuchwephesha-iyila le mfundo yokuxhobisa kunye nokwenza abantu abakhubazekileyo oku kubandakanya abantu abane-cerebral palsy. Oku kwenza iMicrosoft Disability Scholarship phakathi kwezona ndawo ziphambili zokufunda ngengqondo kunye nexabiso le- $ 5,000 kwiminyaka emine.
Isifundi sinikezelwa kwisikolo esiphakamileyo sabakhubazekileyo esifana nokukhubazeka kwengqondo okunenjongo yokuya kwiziko lezobugcisa okanye lezemfundo ukwenza ikhondo lobuchwephesha. Umfaki-sicelo kufuneka abe ne-CGPA encinci ye-3.0 okanye ngaphezulu, abonise ubuchule bobunkokeli kunye neemfuno zemali.
Amanye amaxwebhu zizincoko ezintathu, i-resume, ingxelo ebhaliweyo, kunye neeleta ezimbini zokucebisa.
Esi siseko sibonelela ngenkxaso mali yemfundo kubafundi abakhubazekileyo njenge-cerebral palsy, i-autism, ubumfama, njl. Njl. Njl.
Akukho zibonelelo zenziwa ngokuthe ngqo kubafundi ngabanye endaweni yoko zibonelelwa ziikholeji neeyunivesithi ezidibene neNewcombe Foundation.
Iiyunivesithi ezidibeneyo kunye neekholeji zezi:
IYunivesithi yaseDelaware Valley
University of Fairleigh Dickinson
IYunivesithi yase-Edinboro yasePennsylvania
IYunivesithi yaseLong Island eBrooklyn Campus
Le yenye yezifundo zokukhubazeka kwengqondo ezenzelwe kuphela abafundi abanengxaki yokukhubazeka hayi eyokufunda ngokukhubazeka ngokubanzi njengale ingentla.
Ixabiso lokubhaliselwa ngu- $ 2,500 elinikezelwa kumfundi obhalise okanye owamkelweyo kwiziko lasesekondari- kwikholeji, eyunivesithi, okanye uqeqesho lomsebenzi wobugcisa- ene-GPA ye-2.5 okanye ngaphezulu. Abafakizicelo kufuneka babonise ukuxilongwa kwesifo sobuchopho.
Abantu abane-cerebral palsy okanye abanomntwana okhubazekileyo banokufaka isicelo sale mali yokufunda. Yi- $ 2,000 ukuya kwi- $ 4,000 yokufunda enikwa abantu ababini ukuya kwabathathu kwabo sele bebhalisile okanye malunga nenkqubo yekholeji yeminyaka emine okanye emibini.
Umfaki-sicelo kufuneka abe ne-GPA encinci ye-2.5 ngesincoko samagama angama-200 okanye ngaphantsi achaze izizathu zokuba kutheni umfaki-sicelo efanelwe yimfundo yokufunda kunye nokubhalwa ngokusemthethweni. I-scholarship iyafumaneka kubantu baseUnited States kodwa kuqala kuya kunikwa abo bavela eWisconsin.
Esi sisibonelelo ngokubanzi sabantu abaphila noluhlobo olunye lokukhubazeka okanye olunye olunjengokukhubazeka kwengqondo, okwenza ukuba kudlule njengenye yezifundo zokukhubazeka kwengqondo. Esi sibonelelo sokukhubazeka sinokusebenza kuphela kwiDyunivesithi yaseWisconsin-Madison, oko kukuthi, abafundi abafuna ukufaka isicelo sale mali yokufunda kufuneka babhalise kwinkqubo ye-bachelor's, master's, okanye doctorate eyunivesithi.
Unokufaka isicelo sokufunda xa unokukhubazeka okufana nokukhubazeka kwengqondo kunye nonyaka wakho wokugqibela kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye ujonge ukubhalisa kwiDyunivesithi yaseWisconsin-Madison. Unokufaka isicelo ukuba sele ubhalisile eyunivesithi.
Amanye amaxwebhu okufaka isicelo sokufunda afaka iileta ezimbini ekubhekiswa kuzo kunye nokubhalwa kwezemfundo kwimfundo egqityiweyo ngaphambili. Kuvulelekile kubo bobabini abafundi bamanye amazwe nabasekhaya.
Esi sisibonelelo sonyaka sokufundela abantu abane-cerebral palsy, kwaye ukuba uvaliwe unyaka okanye awuphumelelanga kulo nyaka ungaphinda uzame kunyaka olandelayo. Isifundi sesabantu abafunyaniswe benesifo sobuchopho kwaye babhalise kwinkqubo eyamkelweyo eyunivesithi, ekholejini, okanye kwiziko lobugcisa.
Esi sisifundiswa sokukhubazeka kwengqondo esinokuthi ufake isicelo sokukunceda kunye nokukunceda ekuhlawuleni iikholeji zakho okanye iifizi zokufunda eyunivesithi.
Abantwana abane-cerebral palsy baya kujongana nobunzima ngakumbi ekukhuleni ebudaleni, kwinkululeko, nasekubekeni ekholejini kunabantwana abahlukeneyo.
Ngokungakwazi ukusebenza, zininzi iindlela zokungena, kodwa kukwakho nezixhobo kubandakanya uncedo lwemali, izixhobo ezincedisayo, abafundisi kunye nabanye abanokunceda umntu ukuba aye ekholejini kwaye aphumelele apho
Kwiphulo lokunceda ukuqhubekeka, thina kwiZizwe eziManyeneyo iZizwe eziManyeneyo sililungiselele eli nqaku ukuze uqonde ngokulula kunye nendlela onokulufumana ngayo olu ncedo luza kuwe.
Kule meko, nangona kunjalo, ezi zixhobo zikwimo yokufunda eziza kukunceda kwikholeji okanye eyunivesithi okanye uqeqesho lomsebenzi wobugcisa ukuze ufumane ubuchule obusoloko ufuna ngaphandle kokukhubazeka kwakho
Ukhuseleko lwezeNtlalo iScholarship -Iimfuneko, isicelo, kunye neenkcukacha
I-13 yeeSchoolship Scholarship zaBafundi abane-Autism
I-17 ephezulu ye-Canada Scholarship; Ukuhlawula okuphezulu
Ubungcali obuphezulu be-13 kubafundi ababuya
I-15 ephezulu ye-Scholarship engaziwayo eCanada
Scholarships epheleleyo Masters Scholarship Scholarship Postgraduate Iingcebiso zescholarship Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship I-United States Scholarship
I-cerebral palsy yokufundaukufundiswa kwabafundi abakhubazekileyo
Post Previous:Iinkqubo ezili-10 eziphezulu zeDigital Management Management
Okulandelayo Post:Izifundo zasimahla zeDigree Bible Degree
Pingback: Ubungcali obuphezulu be-15 bokugula ngokungapheliyo kwaBafundi 2022